Vhura sosi maraibhurari raibhurari uye mafomati | Linux Vakapindwa muropa
2 Vhura sosi maraibhurari raibhurari uye mafomati
Kunyangwe iwo mawebhusaiti akasiyana zvakanyanya, vane zvinhu zvakafanana. Wese munhu anoshandisa imwe mhando yemenyu, vazhinji vanoshandisa mafomu ekubatana kana kuratidza mafoto. Kunyora izvo zvikamu kubva pakutanga nguva imwe neimwe pazvinodiwa kunowedzera nguva yekuvandudza uye mutengo.
Iko kuchinjika kweaya masisitimu anosiyana zvichienderana neiyo yakasarudzwa. Vamwe vanoona nzira iyo saiti inofanirwa kuvakwa, nepo vamwe vachigona zviri nani.
Inochengetwa neGoogle uye kuri kufunga kweCkumberi uye chengetedza imwechete peji webhu kunyorera. Inotora iyo yeModel-View-Controller dhizaini.
Angular inoshandisa data inosunga seimwe yemafungiro makuru ekuti basa riitwe. Mushandisi anopindirana neiyo interface. Kana kubatana kwacho kwaitwa, maonero acho anovandudzwa nemaitiro matsva, ayo anozobatana nemhando uye kuona kuti zvese zviri muchiyero.
Iyo furemu inowedzera kugona kweHTML yekushandisa mukugadzira zvine simba zvinoshandiswa. Inotambanudzwa zvizere uye inoshanda nemimwe maraibhurari. Chinhu chega chega chinogona kuchinjwa kana kuchinjwa kuti chienderane nezvinodiwa nevagadziri
Waive zvakagadzirwa neFacebook uye yakanangana nekugadzira zvine simba mushandisi maficha munzvimbo dzakakwirira dzemigwagwa. Iko kushandiswa kweiyo chaiyo gwaro chinhu mamodheru zvinoita kuti zvive nyore kusangana nechero chirongwa.
Chishandiso yakanakira kugadzira epamusoro-soro mapeji ewebhu anoratidza mairafu anotyairwa nedata.
Ndicho inofambira mberi furemu yakagadzirirwa kuvaka mushandisi nzvimbo. Kusiyana nemamwe mafomu emonolithic, Vue yakagadzirirwa kubva pasi kumusoro kuti iwedzere kuwedzera kutorwa. Raibhurari yepakati inotarisa chete pane yekutarisa, uye zviri nyore kusanganisa nemamwe maraibhurari aripo kana mapurojekiti.
Iyi furemu kuvaka webhu kunyorera iInosanganisira zvese zvaunoda kuvaka akapfuma mushandisi maficha anoshanda kune chero chishandiso.
Iyo chikuva chekugadzira nharembozha nema desktop uye mawebhusaiti nenzira yakapusa, inoshanda uye inotyisa.
Zvakare zvinotarisana nekuvandudza kwe3D uye kunoenderana neWebGL yakakosha mukuvandudza mitambo uye mifananidzo. Iyi furemu yakakosha kupa zvinhu zve 3D pachiratidziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Vhura sosi maraibhurari raibhurari uye mafomati
Carles Roy akadaro
AngularJs ndeye Angular1 iri yechinyakare uye isingakurudzirwe kuvandudza kutsva. Kune yazvino vhezheni isu tinofanirwa kureva se "Angular" kuti iome. Batanidzo: https://angular.io/
Pindura Carles Royan
Ini ndakaita kururamisa asi ndakakanganwa kukupa iwe mbiri. Ini ndichazvigadzirisa mune imwe nguva, ndatenda zvakare
Manjaro 20.0 Lysia ndeyepamutemo, ine Linux 5.6 uye mhando nyowani dzemifananidzo yakajeka